America Yotaura nezveMamiriro eZvinhu kuMIddle East
Zvita 16, 2020
VaMike Pompeo gurukota rezvekudyidazana nedzimwe nyika muAmerica
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuMiddle East.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica VaMike Pompeo vange vari kuMiddle East vanoti pane nyaya mbiri dzakabuda dzakakosha panzendo idzi.
Nyaya yekutanga yakabuda ndeyekuti dzimwe nyika dzemuMiddle East dziri kuda kubatana neIsrael mukuchidyana pasi pechibvumirani chinonzi Abraham Accord. Nyika idzi dzinoti Bahrain, the United Arab Emirates, ne Sudan.
Chimwe chibvumirano chechipiri chakabuda ndechekuti nyika idzi dziri kuwirirana kuti Iran iri kukonzera kusagadzikana mudunhu iri. VaPompeo vanoti zvibvumirano izvi zvakakosha zvikuru kwete kudunhu iri chete asi kutiwo pasi rose.
Vanoti nyika dzakawanda dziri kuvatenda kwese kwavari kufamba nekudyidzana wave kuitwa neUnited Arab Emirates, Bahrain neIsrael.
Vanoti zvibvumirano izvi zvakakosha munyaya dzekudyidzana nebudiriro. VaPompeo vati zvibvumirano izvi iyambiro kuIran kuti zvekuda kuyzviita bhuru mudunhu zvapera vachiti ichasara yave yega isina kana shamwari yepedyo.
Vatiwo kugadzirisa kunetsana pakati peIsrael nePalestine kwakakosha zvikuru mukuunza kugadzikana mudunhu iri. VaPompeo vati zvibvumirano zveAbraham Accord zvakakosha kuunza runyararo, kugadzikana nebudiriro muMiddle East nepasi rose.
Mashoko Anotaura Pamire Hurumende yeAmerica kuMiddle East
Chivabvu 26, 2021
Maonero eAmerica paNyaya yeNzara Pasi Rino
mudzimai wekuAfghan akatakura chikafu kubva ku United States Agency for International Development (USAID), ( Kabul, Afghanistan, July 26, 2011)
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yezuva rekupedza nzara kana kuti World Hunger Day. United Nations inoti nzara zvinoreva nguva yekuti vanhu vanenge vachishaya zvekudya kwemazuva akawanda.
Asi vanhu havayaure nenzara nekuti nyika dzepasi rino dzinenge dzisina goho rakakwana. Kunyangwe paine chikafu chinokwanira vanhu vose, vanhu mamiriyoni mazana manomwe nemakumi mana nematanhatu kana kuti 746 million vanorara nenzara.
Musi wa 28 Chivabvu anove mangwana, nyika dzepasi rino dzinocherechedza zuva renzara kana kuti World Hunger Day.
Kusanganisira gore rino, ave makore gumi zuva iri richicherechedzwa uye izvi zviri kuuya panguva iyo vanhu mamiriyoni mapfumbamwe vari kufa gore roga roga nekuda kwenzara. Asi kunyangwe zvakadaro, United Nations inoti huwandu hwevanhu vari kuziya nenzara huri kuramba huchiderera.
Mumakore mana ekutanga emakore ekuma 1900, vanhu vanosvika zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% vange vachifa nenzara. Asi muna 2015, huwandu uhu Hwange hwaderera kusvika pazvikamu zvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 9%.
Asi mumakore mashanu akatevera,vakawanda vakatangazve kushaya zvekudya zvichikonzerwa nenyaya yehondo, kusanaya zvakanaka kana kunayisa kwemvura uye kusagadzikana munyaya dzezvehupfumi munyika dzakasiyana siyana.
Kubva muna 2018 kusvika 2019, huwandu hwevanhu vari kuyaura nenzara hwakawedzera nevanhu mamiriyoni gumi.
Kuuyawo kwechirwere cheCovid-19 kwabva kwakandawo vakawanda mukanwa mamupere sezvo vakarasikirwa nemabasa uye kusarimwa ne kugadzirwa kwezvekudya nekuda kwekutyira kupararira kwechirwere ichi kwakapawo kuti mitengo yezvinhu idhure zvakanyanya.
Covid-19 yakapawo kuti kushanyira kana kutaura nevari kunzvimbo dzine nzara kunetse.
Asi hurumende yeAmerica iyo inopa rubatsiro rwakawandisa kunyika dzepasi rino kuburikidza nezvirongwa zvakaita seFeed the Future nezvimwe zvinoitwa ne U.S. Agency for International Development, the State Department, nebazi rezvekurima inoti yakazvipira kuramba ichibatsira vari kuyaura nenzara pasi rino.
Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yenzara pasi rino.
Mashoko Anotaura Pamire Humende yeAmerica paNyaya yeNzara
Kubvumbi 28, 2021
Maonero eAmerica paKusaitwa kweSarudzo muSomalia
Mutungamiri weSomalia Va Mohamed Abdullahi Mohamed
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSomalia.
Makore mana ekutungamira nyika yeSomalia kwaVaMohamed Abdullahi Mohamed vanozivikanwa nekuti Farmaajo akasvika kwamvura yacheka makumbo nemusi wa 8 Kukadzi asi vachiri pachigaro sezvo paine kunetsana pakati pavo nevatungamiri vematunhu kana kuti Federal Member State kuti sarudzo dzinoitwa riini.
Musi wa12 Kubvumbi, dare reparamende remuSomalia rakatambira bhiri rekuti nhengo dzedare dziramba dziri vamiriri kwemamwe makore maviri pasina kuitwa sarudzo.
Mutungamiri wenyika VaFarmaajo vakabva vatambira bhiri iri zuva rakatevera kunyangwe nhaurirano dzainge dzisati dzapera dzekuti gakava iri rogadziriswa sei.
Dzimwe nyika kusanganisira America dziri kushora zvikuru danho rekuwedzera makore ekutonga pasina kuitwa sarudzo dzichiti zvinokonzera kusagadzikana munyika iyi nedzakapoteredza uye kuti zvinopa chikwata chinopfurikidza mwero cheAl -Shabaab mukana wekurwisa zvakasimba hurumende chichitora mukana wekusabatana uyu.
America nedzimwe nyika dziri kuyambirawo kuti kusagadzirisa gakava iri kuchapa kuti hurumende itadze kuwana nguva yekugadzirisa mamwe matambudziko akatarisana nevanhu.
Mumashoko kuvatori venhau, gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika VaAntony Blinken vanoti havatendereni nevanoda kuramba vachitonga pasina kutenderana kwevanhu vose munyika uye kuti vashoma vangovhote panyaya yakakosha iyi.
VaBlinken vanoti maitiro aya anokonzera kusawirirana uye kuvhiringidza nyaya yekuvandudza nyaya dzezvematongerwo enyika uye kupa kuti vanhu vasiyane nekurwisa Al Shabaab vachinetsana. Vaenderera mberi vachiti zviri kuitwa nehurumende Izvi zvinonotsawo kuitwa kwesarudzo dzakatarisirwa nevanhu vakawanda vemuSomalia.
VaBlinken vati America inokwanisa kutemera vamwe vakuru vemunyika iyi zvirango uye kumbomira kuipa rumwe rubatsiro.
Nyika iyi inorarama nerubatsirwa rwunobva kunyika dzekunze kuti iwane zvekudya uye zvombo zvehondo zvekuzvidzivirira.
VaBlinken vakurudzira mapato ose ari muSomalia kuti atangezve hurukuro pasina kuita humbimbindoga zvinozounza kusagadzikana.
Ayo mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuSomalia.
Mashoko Anotaura Pamire Hurumende yeAmerica Pane Zviri Kuitika muSomalia
Kubvumbi 15, 2021
America neMadzisahwira Ayo Dzokurudzira Ethiopia KUita Nhaurirano dzeKupedza Kurwisana muTigray
Gurukota reAmerica rezvekudyidzana nedzimwe nyika, VaAntony Blinken nemukuru wehurumende yeEthiopia,VaAbiy Ahmed.
Gurukota re America rinoona ne zvekudyidzana nedzimwe nyika, rakabatana nemakurukota ezvekudyidzana ne dzimwe nyika anobva kunyika dze G-7, dzinosanganisira Canada, France, Germany, Italy, Japan ne United Kingdom, pamwe chete ne mumiriri we European Union, vanoshushikana nekutyorwa kwekodzero dzevanhu nekumbunyikidzwa kwavo mudunhu re Tigray mu Ethiopia.
Kurwisana kwakatanga muna Mbudzi mushure mekunge mutungamiri weEthiopia, VaAbiy Ahmed, vatumira mauto mudunhu reTigray nechinangwa chekudzosera hutongi hwe mutemo nekubvisa pahutongi bato reTigray People’s Liberation Front, raipomerwa mhosva yekurwisa kamba ye mauto eEthiopia.
Kubva patanga kurwisana uku, vanhu vazhinji vakatiza kubva mudunhu reTigray vachinotsvaka hupoteri munyika yakavakidzana ne Ethiopia, ye Sudan.
Mugwaro rakabudiswa nenyika dze G-7, nyika idzi dzinoti dzinoshora zvakadzama kuurawa kwevanhu, kushungurudzwa kwevanhukadzi, nekubviswa kwe vapoteri ve kuEritrea nevanhu veTigray mumisha yavo.
Nyika dze G-7 dzinokurudzira mativi ose ari kurwisana kuti achengetedze hupenyu hwevanhu nekodzero dzavo, pamwe chete nekuremekedza mitemo inoteverwa ne nyika dzose.
America ne madzisahwira ayo vanotarisira kuti hurumende ye Ethiopia ichasunga vose vari kutyora kodzero dzevanhu.
Masangano anoona ne zvekodzero dzevanhu, eEthiopian Human Rights Commission ne hofisi ye United Nations High Commissioner for Human Rights, akabvumirana kuongorora kutyorwa kwe kodzero dzevanhu kwakaitwa ne mativi ose ari kurwisana mudunhu reTigray, vachiti zvakakosha kuti masangano akazvimirira aite ongororo ye mhosva dzakaparwa kuti vose vakatyora kodzero dzevanhu vasungwe.
America ne madzisahwira ayo vanokurudzira vari kurwisana kuti vape mukana wekupinda munzvimbo idzi kune vanobatsira kuti vakwanise kusvitsa rubatsiro kune avo vari kunetseka.
Pane kutyira kuti dzimwe nzvimbo dziri pakati uye kumabvazuva kwe Tigray hadzisisina chikafu.
VaAbiy vakazivisa kuti mauto eEritrea achabuda mu Tigray. America ne madzisahwira ayo vanokurudzira kuti izvi zviitwe nekukurumidza uye zviri pachena.
America ne madzisahwira ayo vanokurudziravo kuti kurwisana kupere uye kuti paitwe nhaurirano dzinounza kushanda pamwe chete kwe vari kurwisana kuti pagoitwa sarudzo dzakachena, dzinounza kushanda nekugarisana zvakanaka kwevanhu vose mu Ethiopia ne Tigray.
Nyika dze G-7 dzinoti dziripo kubatsira vanhu vari kunetseka munzvimbo iyi pamwe chete nekubatsira ongororo dze kutyorwa kwe kodzero dzevanhu.
America Inokurudzira Ethiopia Kupedza Kurwisana muDunhu reTigray
Kurume 31, 2021
America Inoti Kodzero dzeMadzimai Musimboti weKudyidzana Kwayo neDzimwe Nyika
Gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika VaAntony Blinken
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yekuremekedza madzimai anoratidza hushingi mukurwira kodzero dzevanhu.
Gore rino madzimai makumi maviri nemumwe vakapihwa mubayiro wehushingi mumabasa avo nekurwira kodzero dzevanhu kana kuti International Women of Courage Awards.
Pamadzimai aya, pane manomwe kubva kunyika yeAfghanistan. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika VaAntony Blinken vakabatana nemudzimai wemutungamiri wenyika Amai Jill Biden.
VaBlinken vanoti kwemakore gumi nemashanu adarika bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika reState Department range richipa mubayiro weInternational Women of Courage kumadzimai pasi rose vanoratidza hushingi nehutungamiri vachirwira runyararo, kodzero dzevanhu uye kuwanisa mukana wakaenzana kumadzimai nevanhurume.
Mumwe mudzimai akapihwa mubayiro ndiAmai Maria Kalesnikva vekuBelarus avo vakabatana nevamwe kupikisa hutongi hwaVaAleksandr Lukashenka avo vatonga nyika iyi kwemakore makumi maviri nematanhatu kunyangwe vaisungwa pakapera sarudzo dzinonzi nevanopikisa dzakabirirwa zvemhando yepamusoro.
Mumwe akapihwa mubayiro ndiAmai Phyoe Phyoe Aung vekuBurma. Sangano ravo reThe Wings Institute rinopa vechidiki kubva kumarudzi nezvitendero zvakasiyana siyana mikana yekushanyirana senzira yekuunza runyararo nekubatana munyika iyi.
Amai Maximilenne Ngo Mbe vekuCameroon avo vanorwira kodzero dzevanhu mukuyedza kuunza runyararo munyika iyi ine kurwisana pakati pehurumende nevakaipandukira. Vamwe vakawana mubayiro ndi Amai Wang Yu vekuChina avo vanorwirawo kodzero dzevanhu.
Kubva kuDRC Amai Julienne Lusenge vanozivikanwa zvikuru nekurwira kodzero dzevanhu kunyangwe zvichipinza hupenyu hwavo munjodzi.
Vamwe vakapihwa mubayiro uyu vanosanganisira Amai Mayerlis Angarita veku Colombia, Mutongi Judge Erika Aifan vekuGuatemala, Amai Shohreh Bayat vekuIran, Amai Muskan Khatun veku Nepal, Amai Zahra Mahamed Ahmad veku Somalia, Sister Alicia Vacas Moro vekuSpain, Amai Ranitha Ghanarajah veku Sri Lanka, Amai Canan Gulllu veku Turkey, uye Amai Ana Rosario Contreras veku Venezuela.
VaBlinken vanoti madzimai nevanasikana ndivo vanowanzosangana nematambudziko ekutyorerwa kodzero dzavo.
Vanoti nekuda kwekuti madzimai nevanasikana varimunjodzi yakakura, ndokusaka hurumende yemuAmerica ichikoshesa kuremekedzwa kwekodzero dzavo munyaya yekudyidzana nedzimwe nyika.
Vachitaura nevakawana mibayiro ava, VaBlinken vakati vari kubatsira kuti pasi rose rive nerunyararo uye kuva nekugadzikana. Vanoti America inotsidza kushanda nekutsigira madzimai aya.
Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yemadzimai ari kurwira kodzero dzevanhu pasi rose. Maaverengerwa neni Blessing Zulu weStudio 7.
Kurume 24, 2021
Tinocherechedza Makore Makumi Matatu Nematatu Ekushandiswa kweZvombo zveMuchetura Paguta reHalabya muIraq
Madzimai echi Kurdish vari mumakuva ehama dzakaurawa nemuchetura munazuva aVaSaddam Hussein
Mwedzi uno tinocherechedza makore makumi matatu nematatu ekushandiswa kwezvombo zvemuchetura kuguta revechiKurdish veku Iraq reHalabja.
Kurwiswa uku kwaive chimwe chehurongwa hwaSaddam Hussein hwe al-Anfal, uhwo hwakatamisa pamwe nekuuraya muhuwandu vanhu vekumaodzanyemba kwe Iraq.Kutanga muna 1986 kusvika muna 1989, maguta nemisha yevechi Kurdish yakaparadzwa, zviuru nezviuru zvema Kurd zvakatsakatika kana kuurayiwa, uye Saddam akamanikidza mazana ezviuru ema Kurd kubva pamisha yavo.Hurongwa uhwu hwakavhiringidzawo mamwe marudzi nemakereke madiki emunharaunda, kusanganisira verudzi rweAssyrian, Shabak, Iraqi Turkmen, Yazidi, neve Mandean.
Pakati paKurume 1988, mauto ehurumende ye Iraq akapedza mazuva maviri achirwisa guta re Halabja nezvombo zvema rocket nemuchetura we napalm. Izvi zvakaparadza magonhi pamwe nemafafitera ezvivakwa zvakanga zvichakamira uye kuburitsa muguta iri vagari vanosvika zviuru makumi mashanu vachinohwanda mumwena.
Muhusiku hwepiri hwekurwiswa uku, Kurume 16, kurwiswa uku kwakamira. Zvikopokopo nendege dzehondo zve Iraq zvakatanga kumwaya guta iri nemuchetura, kusanganisira mweya wegasi une mustard, pamwe nemichetura inoparadza tsinga ye sarin, tabun, ne VX. Sezvo muchetura uyu wakanga uchirema kudarika mhepo, wakadzika pasi uchipinda muvhu, uchipindawo mudzimba nepamagonhi nemafafitera zvakapwanyika, kusvika paive pakaungana vanhu nekutya, vakamirira kuti kurwiswa uku kumire.
Aka kaive kekutanga munhoroondo yemazuva ano kuti hurumende inorwisa vanhu vayo nezvombo zvemuchetura.
Vanhuwo zvavo, vanosvika zviuru zvishanu, vakafa nekuda kwezvombo zvemuchetura wakadonhedzerwa pa Halabja. Vamwe vanosvika zviuru gumi vakaita mapofu, kana kukuwadzwa. Mumakore akatevera, zviuru zvevamwe zvakafa kuburikidza nekukanganisika kwehutano nezvirwere zvaiparadza.
Varume vaviri vaive nechekuita nemhosva iyi vakazopedzisira varipira zviito zvavo. Saddam Hussein, uyo akatuma kuti vanhu varwiswe pasi pechirongwa che Anfal, akawanikwa aine mhosva dzekuuraya vanhu akatongerwa mutongo werufu achisungirirwa. Hama yake, Ali Hassan Abd al-Majid, uyo aizivikanwa nerekuti Chemical Ali, anove ndiye akatungamira chirongwa che Anfal akave ndiye akaona nezvekurwiswa kwe Halabja, akawanikwa aine mhosva yekuponda vanhu verudzi rwema Kurd emu Iraq akatongerwa rufu.
Apo zvakaitika kune vese vakakonzeresa chiitiko che al-Anfal nekuuraya zviuru zvevanhu vasina mhosva mu Halabja zvichifanirwa kushanda seyambiro kune vamwe kuti vasateedzera tsoka dzavo dzehumhondi, zviri pachena kubva mukushandiswa kwemuchetura wegasi re Sarin ne Syria kuti pasi rose rinofanirwa kuramba rakangwarira kuzviitiko zvehumhondi nekushandiswa kwezvombo zvinoparadza ruzhinji.
Editorial Remembering Chemical Attack on Halabya, Iraq